Iindaba-Ukhuseleko lwabalandeli bemizi-mveliso
I-Bejarm fan fan iyasuswa kwaye inokufakwa ngokufanelekileyo, kulula ukuyisebenzisa kwaye inokufezekisa injongo yokupholisa ngokukhawuleza. Abavelisi banesidanga esiphezulu sokwamkelwa kwesiphumo sokupholisa fan Bejarm. Nangona kunjalo, xa bejamelene nabalandeli abakhulu, abavelisi basenamathandabuzo malunga neengxaki zokhuseleko. Namhlanje, masibone ukhuseleko lwentsebenzo ye-Bejarm fan fan kunye!
Amandla aphezulu e-bolt yemizi-mveliso
IBakala 8.8 iibholiti zokomelela ngamandla, ukutshixa amandongomane kunokuthintela ukukhululeka, ukunqumla eludongeni, ukunciphisa umngcipheko wokuba ifeni iwele kwindawo enkulu, ukuphucula uzinzo.
Iintambo ezine zinokumiliselwa eluphahleni, kwaye amandla oxinzelelo lwentambo nganye yesinyithi inokufikelela kwi-1000kg. Sisebenzisa isixhobo esiqinisa, kwaye iintambo ezine zinokuqiniswa ngaxeshanye ukwandisa ukubanakho komthwalo, ukwenzela ukuphucula ukhuseleko kunye nozinzo lwe fan.
Isangqa sokhuseleko kabini
Unxibelelwano phakathi kweebhley fan zomdabu kunye nesiphatho sebambo kulula ukuyikhulula phantsi kokujikeleza kwexesha elide, ebangela ukuba iincakuba ziphule okanye ziwe. Nangona kunjalo, iringi yokhuseleko lwabalandeli idibanisa onke amalungu, kwaye icandelo ngalinye lokudibanisa lilungiswe ngeebholithi. Iringi yokhuselo ephindwe kabini idlala indima yokhuselo kwimeko yengozi kwaye ithintela nawaphi na amalungu ekutyibilikeni.
Iincakuba Ulenze ukunciphisa ubunzima
I-fan blade yenziwe nge-aluminium magnesium ingxubevange, enobunzima bokukhanya, ubunzima obuphantsi, ukulungeleka kobushushu, eyomeleleyo kuxinzelelo lokucinezelwa, kunye nokunciphisa amandla okuphatha fan. Inkampani yethu isebenzisa ukusika kumngxuma ukunciphisa ubunzima, kunye nemivalo zentsimbi zangaphakathi ezintathu ukomeleza yobulukhuni, ukuze ngempumelelo ukunciphisa umngcipheko iincakuba fan ukwaphuka nokwandisa ukhuseleko ukhuseleko.
Ukulawulwa kwencoko rhoqo; Ukujonga ixesha lokwenyani
Inkqubo yolawulo lokuguqulwa kwamaxesha anokubeka iliso kwimeko yefeni nangaliphi na ixesha, ahlengahlengise isantya somoya ngokukhululekileyo, kwaye inenkqubo yayo yokhuseleko engaphezulu yokujonga ukhuseleko, ukunciphisa umda wokungaphumeleli, wandise ubomi benkonzo.